Maxkamadda sare ee dalka oo go’aano culus oo saartay | Banaadir Times
HomeUncategorisedMaxkamadda sare ee dalka oo go’aano culus oo saartay
Maxkamadda sare ee dalka oo go’aano culus oo saartay
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed oo sooo saaray go’aano ku saabsan xakameynta faafitaanka cudurka Covid-19 ee la xariira hannaanka shaqada ee hey’adaha garsoorka dalka.
Qoraal uu soo saaray Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa lagu shaaciyay 11 qodob oo lagu xakameynayo fafinta Coronavirus, kuwaas oo ku socda Madaxda & shaqaalaha Hay’adaha Garsoorka dalka, waxaana ay kaal yihiin.
1: Dhamaan howl-wadeenada Garsoorka, ciidamada amniga, Qareenada iyo Shacabka adeega cadaaladeed u soo doonta Hay’adaha waxaa la faraayaa inay xirtaan afsaabka ( Mask) ilaaliyaana kala fogaanshaha iyaga oo isku jirsanaya ugu yaqaan 2 tallaabo.
2: Ciidamada ilaaliyo amniga Hay’adaha garsoorka waxaa la farayaa in aaney qof aan afka xirneyn u ogolanin in uu soo galo Xarumaha Hay’adaha garsoorka.
3: waxaa Xarumaha garsoorka soo geli kara kaliya qof dacwadiisa mudeysan tahay iyo qof dacwad furnaya kaliya.
4: Dhamaan dacwadaha waa in lagu dhageysto Maxkamadaha oo xiran, waxaa loo ogol yahay kaliya Xubno kooban oo dhinacyada kamid ah qareenada ama xeer ilaaliyaha.
5: Waa in la joojiyo in dacwadaha lagu dhageysto Xafiisyada Garsoorayaasha laguna dhageystaa qolalka loogu talo gala dhageysiga dacwadaha.
6: Waxaa la fasaxay howl-wadeenada gasroorka ee da’doodu weyn tahay, shaqalaha lag maarmi karo iyo dhamaan tababarayaasha Hay’adaha Garsoorka ku tababarta.
7: Iyada oo la dhowrayo badqabka maxaabiista iyo eedeysanayaasha waa in la kala saaraa dhaqaajinta dacwadaha ciqaabta ah.
8: waa in la xoojiyaa ku shaqeynta hanaanka Electroniga ahee maareynta dacwadaha si loo yareeyo waraaqaha ikaag gudbaya gacmaha dadka.
9: Hal qareen dhinac kasta ku matali kara dacwadiiba Maxkamadda horteeda inta lagu guda jiro xaalada xanuunka COVID-19.
10: Waxaa la yareeyay dhamaan kulamda tooska ah ee aan muhiimka aheyn.
11: howl-wadeena garsoorka waxaa la faraay inay si buuxda ugu hoggaansamaan awaamiirta iyo talooyinka lagu xakameynayo faafida xanuunka ee kasoo baxay wasaaradaha Caafimadaka ee dowladda Federaalka & dowlad Goboleedyada.
Previous articleKenya oo bedeshay qareenadii u doodayay dacwada badda ee kala dhexeeysa Somalia
Next articleMadaxda Dowladda oo Muqdisho kulan kula leh Wakiilka QM ee Soomaaliya